मेरो एक ग्राहकले बल्क होस्टिंग खातामा आफ्नो वेबसाइटलाई पुन: स्थानान्तरण गर्‍यो। तिनीहरूले A र CNAME रेकर्डको लागि उनीहरूको डोमेनको DNS सेटिंग्स अपडेट गर्‍यो तर साइट नयाँ होस्टिंग खाता (नयाँ आईपी ठेगाना) सँग समाधान गर्दैछ कि हुँदैन भनेर निर्धारण गर्न गाह्रो भयो।
यसमा एक नोट ... हरेक डोमेन रेजिस्टरले वास्तवमा तपाईंको DNS प्रबन्ध गर्दैन। मसँग एउटा ग्राहक छ, उदाहरण को लागी, कि याहू मार्फत उनीहरूको डोमेन रेजिस्टर! याहू! वास्तवमा उनीहरूको प्रशासनमा यस्तो देखिँदै डोमेन व्यवस्थापन गर्दैन। तिनीहरू केवल को लागी एक बिक्रेता हो Tucows। नतिजाको रूपमा, जब तपाइँ याहूमा तपाइँको DNS सेटि toहरूमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ, ती परिवर्तनहरू वास्तवमा अद्यावधिक हुनु अघि घण्टा लिन सक्दछ। वास्तविक डोमेन रजिस्ट्रार।
तपाईंको स्थानीय प्रणाली द्वारा फिर्ता र क्यास गरिएको आईपी ठेगाना एकल वेबसाईटमा सामान्यतया अद्वितीय हुँदैन। एक होस्टमा दर्जनौं वा सयौं वेबसाइटहरू एकल आईपी ठेगानामा होस्ट हुनसक्दछ (सामान्यतया सर्वर वा भर्चुअल सर्भर)। त्यसोभए, जब तपाईंको डोमेन आईपी ठेगानाबाट अनुरोध गरिन्छ, तपाईंको होस्टले तपाईंको अनुरोधलाई सर्वर भित्र निर्दिष्ट फोल्डर स्थानमा फर्वार्ड गर्दछ र तपाईंको पृष्ठ प्रस्तुत गर्दछ।
यदि तपाइँ वेब ठेगानामा आईपी ठेगाना ठीकसँग देखाइरहनुभएको छ र तपाइँको साइट अझै देखाईएको छैन भने, तपाइँ इन्टरनेटको सर्भरहरू पनि बाइपास गर्न र तपाइँको प्रणालीलाई आईपी ठेगानामा सिधा अनुरोध पठाउन भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो होस्ट फाईलहरू अद्यावधिक गरेर र तपाईको DNS फ्लस गरेर पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, टर्मिनल खोल्नुहोस् र टाइप गर्नुहोस्:
यी चरणहरू अनुसरण गरेर, म प्रमाणित गर्न सक्षम भएँ कि रेजिस्टरमा मेरा DNS प्रविष्टिहरू मितिमा थिए, इन्टरनेटमा DNS प्रविष्टिहरू मितिमा थिए, मेरो म्याकको DNS क्यास अप टु डेट थियो, र वेब होस्टको DNS अप थियो। मितिमा ... जानु राम्रो छ!